ကမ္ဘာကြီးနှင့်အခြားအရာများကိုစားရန်အတွက် Google သည် Pixel3နှင့် Pixel 3XL ကိုတင်ဆက်သည် Androidsis
Habemus Google Pixel3နှင့် 3XL - G သည်လက်ထောက်နှင့်ဓာတ်ပုံနှင့်အတူအရာရာတိုင်းအတွက်ဖြစ်သည်
Manuel Ramirez | | မိုဘိုင်း
ခဲသည် Google Pixel3နှင့်အသစ်ထွက်ရှိခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကြားသိရသည်။ သီတင်းပတ်များစွာကြာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်လများဟုဆိုရပြီး၊ ယိုစိမ့်မှုသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖောင်းပွမှုဟုခေါ်သည့်အမြင့်ဆုံးလူသိများသည့်အဆင့်သို့တက်ရန်ထွက်ပေါ်လာခြင်းကိုမရပ်တန့်သေးပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂူးဂဲလ်ဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်အံ့အားသင့်စရာအံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုကိုစောင့်ဆိုင်းရင်းငါတို့အားလုံးကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့ပါတယ်။
Google Pixel3နှင့်3XL တို့ရောက်ရှိလာသည် သင်၏ပရိသတ်များက Google ဖုန်းအသစ်ကိုထပ်မံရနိုင်သည် မင်းလက်ထဲမှာ သို့သော် G သည်၎င်း၏လက်ထဲတွင်ရှိသောကြီးမားသောရည်မှန်းချက်ကိုထမ်းဆောင်နေသောအရာအားလုံးထက် - AI + Software + Hardware ကို အခြေခံ၍ အတွေ့အကြုံရှိသောကိရိယာများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ Google Assistant သည်သုံးမျိုး၏အခြားသောအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သော hardware များကိုကျွန်ုပ်တို့အားအတွေ့အကြုံယူရန်ခံယူချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
1 Google ကထပ်လုပ်တယ်
2 အကောင်းဆုံး: AI + software + ဟာ့ဒ်ဝဲ
3 Google Pixel3နှင့်3XL ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
4 အမြင်အာရုံနှင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် Google Pixel3နှင့်3XL အကြောင်းပြောနေသည်
Big G သည်မည်သည့်အခါမျှမအံ့သြလောက်အောင်မရပ်တန့်နိုင်ဘဲကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာသေးမီကပြောင်းလဲတိုးတက်ခဲ့သောနည်းပညာကုမ္ပဏီများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပရီမီယံဖုန်းများကိုပင်ရရှိရန်အသံသည်အလောင်းအစားဖြစ်သည် သူတို့သည် Samsung နှင့် Apple တို့၏မျက်နှာကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြသည်; ပထမဆုံး Google Pixel သည်အလွန်မြင့်မားသောစျေးနှုန်းရှိကြောင်းဝေဖန်မှုများပြားသည့်အချိန်တွင်မည်သူပြောမည်နည်း။
ဒါပေမယ့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံအခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၏တန်ဖိုးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်နှစ်သာရှိသေးသည်။ Android ကိုစင်ကြယ်သောပုံစံဖြင့်ရရှိခြင်းသည်ထူးခြားသည့်စွမ်းဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။ Google သည် Pixel အမှတ်တံဆိပ်ကို ဆက်လက်၍ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်နေသည်။ အကယ်စင်စစ်သူတို့ကအချို့သောကြမ်းတမ်းသောအနားချ file တဲ့အခါ, သူတို့ကယခုငါတို့ရှိသည်ထက်ပို။ ပင်သိသိသာသာဖုန်းများဖြစ်လိမ့်မည်။
အကောင်းဆုံး: AI + software + ဟာ့ဒ်ဝဲ
Android Pie 9.0 ကိုစက်ရုံမှရရှိနိုင်သည့်အပြင် Pixels အသစ်နှစ်ခုလည်းရှိသည် နောက်တဖန်သူတို့သည်ကြီးစွာသောဓာတ်ပုံရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် 12.2 MP အာရုံခံကိရိယာကိုအသုံးပြုရန်အတွက်အဓိကဖွဲ့စည်းထားသော dual-configuration မှပင်သွားနိုင်သည်။ ရှေ့ကင်မရာတွင် 8MP နှင့်အုပ်စုလိုက်ဓါတ်ပုံများအတွက်မှန်ဘီလူးနှစ်ခုဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ Pixel ၏အလွန်ကောင်းမွန်သောပုံတူမုဒ်နှင့်ဓာတ်ပုံများမည်သို့ကြည့်မည်ကိုမျှော်လင့်နေပါသည်။
အရေးကြီးသည့်အချက်မှာယနေ့ခေတ် Google ၏အဓိကကင်မရာကို Google ကင်မရာကယူဆောင်သွားရန်ဖြစ်သည်။ AI + software ကို + ဟာ့ဒ်ဝဲ။ ကင်မရာအက်ပ်သည်ဤပြိုင်ပွဲ၏ကျန်ပြိုင်ဘက်များထက်ကျော်လွန်သောခြေရာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟူသောရှင်းလင်းသောဥပမာဖြစ်သည်။
ထိုညဉ့်ကို Sight ကိုမီးမောင်းထိုးပြရန် flash မလိုဘဲဓာတ်ပုံရိုက်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာကွန်ပျူတာဆော့ဝဲလ်သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်အလင်းနည်းသောဓါတ်ပုံများကိုရိုးရှင်းစွာရိုက်ကူးခြင်းဖြစ်သည်။ ပုံများနှင့်အတူအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတစ်သရုပ်ပြ။
Google Pixel3နှင့်3XL ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
အမှတ် Google Google
ပုံစံ pixel3pixel3XL
operating system အန်းဒရွိုက် 9.0 Pie အန်းဒရွိုက် 9.0 Pie
ဖန်သားပြင် ၅.၅ လက်မ - Full HD + AMOLED 5.5: 18 6.3 "QHD + (2960 x 1440), P-OLED 18.5: 9
Processor ကို Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm Snapdragon 845
ပြည်တွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း 64GB / 128GB 64GB / 128GB
အဓိကအခန်း 12.2 MP -f/ 1.8 - 1.4um - OIS - Pixel Core - 4K / 30FPS 12.2 MP -f/ 1.8 - 1.4um - OIS - Pixel Core - 4K / 30FPS
ရှေ့ကင်မရာ 8 + 8MP -f/ 2.2 - 1.4um - 1080p ဗီဒီယို 8 + 8MP -f/ 2.2 - 1.4um - 1080p ဗီဒီယို
ဘက်ထရီ ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းနှင့်အတူ 2.915 mAh ကြိုးမဲ့အားသွင်းနှင့်အတူ 3.430
ရှုထောင့် 145.6 x ကို 68.2 x ကို 7.9mm 158 x ကို 76.6 x ကို 7.9mm
သည်အခြား features တွေ NFC - နောက်လက်ဗွေဖတ်စနစ် - Bluetooth 5.0 - GPS - USB အမျိုးအစား C - IP67 NFC - နောက်လက်ဗွေဖတ်စနစ် - Bluetooth 5.0 - GPS - USB အမျိုးအစား C - IP67
အမြင်အာရုံနှင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် Google Pixel3နှင့်3XL အကြောင်းပြောနေသည်
del Pixel3XL သည်၎င်း၏ ၆.၅ လက်မ P-OLED မျက်နှာပြင်ကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်ပုံမှန် Pixel သည် OLED အမျိုးအစား panel တွင်ရှိနေစဉ်တွင်။ Screen နှစ်ခုစလုံးတွင်အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးဖုန်းများအဖြစ်ထွက်ပေါ်လာသည့်ဖုန်းနှစ်လုံးနှင့် Qualcomm မှ Snapdragon 845 ချစ်ပ်ကို RAM 4GB (အမှန်တကယ်မလိုအပ်တော့ပါ) နှင့်ရွေးချယ်ထားသည့်မော်ဒယ်ပေါ် မူတည်၍ 64 မှ 128GB ကျော်လွန်သော internal memory ရှိသည်။ ။
ဒီနှစ် Google ကြီးမားတဲ့ထစ်ထားတော်မူပြီ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထွက်မတ်တပ်ရပ်စေရန်။ ၎င်းသည်အသိပေးချက်များနှင့်ပါ ၀ င်သောဒြပ်စင်များအတွက်ကျန်သည့်ကျန်ရှိနေသေးသောနေရာအားလုံးကိုအလွန်ထိရောက်စေသည်။ ဒါပေမယ့်ပုံကြီးချဲ့တာတောင်မှကြည့်လို့မရပါဘူး။ ကျနော်တို့ကသူတို့ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားသောအရွယ်အစား၏ထစ်လုပ်တော်မူပြီသူတို့ရဲ့အကြောင်းပြချက်ရှိသည်ဆိုပါစို့; ကျွန်ုပ်တို့စားမည့်နေရာအားလုံးကိုစဉ်းစားရန်မလိုချင်ပါ PUBG မိုဘိုင်းအမျိုးအစားဂိမ်းများ o Fortnite.
ထိုအဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဆက် audiojack မရှိပါ (ဒီအမှတ်တံဆိပ်နဲ့အတူအမြဲတမ်းရှိနေပုံရသည်) နှင့် USB-C အမျိုးအစားချိတ်ဆက်မှုအတွက်ထိုနားကြပ်။ ၎င်းတွင်နားကြပ်အပြင် USB-C မှ 3.5mm dongle၊ USB type-C အခြား type-C cable နှင့်အခြား USB type-C မှ USB type-A dongle တို့ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည် USB Type-C ကိုသွားရန်နှင့် audiojack မှနေရာတိုင်းသို့သွားရန်ခက်ခဲသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Pixel Stand သည်နောက်ထပ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည် သင့်ဖုန်းကိုအားသွင်း။ သင်၏အသံဖြင့်ထိန်းချုပ်ပါ como က google အိမ်ကအချက်အချာဖြစ်လျှင်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်သင်၏ Pixel3ကိုအိပ်ခန်းဘေးစားပွဲပေါ်တွင် ထား၍ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
Google Pixel3ကို 849GB ဗားရှင်းအတွက် ၈၄၉ ယူရို၊ 64GB ဗားရှင်း ၉၄၉ ယူရိုကြိုတင်မှာယူနိုင်ပါပြီ။ Pixel 3XL သည် 949GB ဗားရှင်းအတွက် ၉၄၉ ယူရိုအထိရှိပြီး 64GB ဗားရှင်းကို ၁,၀၄၉ ယူရိုအထိရရှိနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Habemus Google Pixel3နှင့် 3XL - G သည်လက်ထောက်နှင့်ဓာတ်ပုံနှင့်အတူအရာရာတိုင်းအတွက်ဖြစ်သည်
Google Pixel Slate ဟာတရားဝင်ဖြစ်နေပြီ။ ငါတို့အားလုံးကိုငါတို့ပြောပြီ!
Google Home Hub (သို့) Google Assistant သင့်အိမ်၌တက်ဘလက်တစ်ခုလုံးတပ်ဆင်ထားသည်